Umzi-mveliso woMshini wokuTyala weTkokolethi, uMboneleli woMatshini wokuTyala ngeTsokholethi-umatshini we-LST
I-macine yokugquma itshokholethi isetyenziselwa ukusetyenzwa nzulu kweemveliso ezinxulumene netshokholethi, ngumatshini osetyenziswa kwishishini le-confectionery ukwambathisa into yokutya ngento yokwaleka, ngokuqhelekileyo itshokolethi, into yokutya efana nebha yetshokholethi, indongomane, ilekese enzima, iFudge, ialmondi, iirasin, njl
Ziziphi iintlobo zomatshini wokugquma itshokolethi
Ngohlaziyo lwetekhnoloji, siyaqhubeka nokwazisa izizukulwana ezithathu zoomatshini bokugquma, zonke iinkcukacha ngolu hlobo lulandelayo:
Umatshini wokugquma itshokholethi/umatshini wokupolisha ungaphezulu komatshini wetekhnoloji yemveli osetyenziselwa ukunxiba iimveliso ngesantya sokugquma/ipeyilisha ejikelezayo, ezona nxalenye ziphambili kukugquma/ipani yokupholisha kunye nemoto ephambili, umthamo wokukhupha ukusuka kwi-6kg/batch ukuya kwi-120kg/batch. Lo matshini unokusetyenziselwa ukugquma kunye nokupolisha iitshokholethi ezineemilo ezahlukeneyo, ezinje ngerawundi, i-oblate, i-oval, imbewu kajongilanga emile, i-cylindrical njl njl, iyenza ibebengezela, kwaye ibengezele ngokukhazimla phezu komhlaba.Ngapha koko, iitshokholethi ziya kujongeka zibuthathaka ngakumbi emva kokupholishwa.
Ibhanti yetshokholethi yokugquma / umatshini wokupholisha olungele ukugquma amaziko ahlukeneyo ngetshokholethi emnyama okanye emhlophe kunye ne-compound.Umatshini osetyenziswa kakhulu kwiimveliso ezixutywe ngamandongomane, iialmonds, iirayisi, iibhola zerayisi ezikhukhumeleyo, iilekese zeJelly, iilekese ezinzima, iilekese zeQQ. kunye ne-melissa njl.Sisixhobo sokuvelisa ubuninzi beemveliso ezinxulumene netshokolethi.
I-Rotary-drum chocoalte iswekile yokugquma/umatshini wokupholisha yitekhnoloji yethu yamva nje ye-R & D, ingasetyenziselwa ukugquma itshokholethi yeemilo ezahlukeneyo, i-candy candy coating, njl.njl., 360 ° ukujikeleza, isiphumo esingcono sokugquma, sisetyenziswa kakhulu ekutyeni, kumayeza kunye nakumayeza ishishini lomkhosi, sisixhobo esikwisiphelo esiphezulu setshokholethi, ukugquma umgubo kunye nokupholisha iipilisi, iipilisi, iilekese, njl.
Injani inkqubo yokusebenza yeRotary-drum chocoalte sugar coating/umatshini wokupholisha?
Umatshini wethu we-Rotary-drum chocoalte iswekile/umatshini wokupholisha ugcwele umatshini wokugquma ozenzekelayo, ukujikeleza kwe-360 °, ukulayishwa kwezinto ezizenzekelayo kunye nokukhulula.
Jonga ividiyo yethu kwinkqubo yokusebenza kumatshini wokugquma itshokolethi.
Yintoni inqaku leRotary-drum chocoalte sugar coating/umatshini wokupholisha?
1.Ukulayishwa kwezinto ezizenzekelayo, ukusetyenzwa kwemveliso kunye nokothula.
2.Automatic isiraphu isitshizi, umgubo isitshizi ad amandla ukususwa uthuli.
3.Ukucoca ngokuzenzekelayo, ukomisa kunye nokunciphisa umswakama.
4.Isithuba esivalekileyo, iqondo lobushushu kunye nokufuma kuyalawuleka, akukho lungcoliso.
I-5.Ayinqunywanga ngokubunjwa kwemveliso, inokwambathisa iimveliso zeemilo ezahlukeneyo.
Yintoni esetyenziselwa ukugquma itshokholethi/umatshini wokugulisa?
Iingubo zetshokholethi/umatshini wokupolisha osetyenziswa kakhulu kwivenkile yetshokholethi, ivenkile ye-ice cream kunye neworkshop encinci yasefektri.
Ibhanti kunye neRotary-drum yetshokholethi yokugquma / umatshini wokupolisha usebenzisa ukuveliswa kwenkqubo ukulawula inqanaba lokuzenzekelayo, lilungele ukuchazwa kwemveliso eyahlukileyo, umthamo omkhulu wokukhupha, sisixhobo esifanelekileyo sokutshintsha inani elikhulu leembiza zokupholisha, ezisetyenziswa ikakhulu kukutya nakumayeza. amashishini
Iteyiti yeTsokholethi kunye nePani yokupholisha
Ibhanti yoHlobo lwePowder yeChocolate kunye noMatshini wokuNgcwelisa
I-Rotary-drum ye-Chocoalte ye-Sugar Powder Coating kunye nomatshini wokupolisha